Fifaninanana - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Fifaninanana 'Fanontaniana momba ny fanentanana momba ny fanabeazana' 1Coast
Mila ny fanampianao izahay! Mba hahazoana antoka fa tonga any Coasties izahay miaraka amin'ny fandaharam-pampianarana momba ny fanodinana sy ny fitantanana ny fako, dia mila mameno ny anay izahay fanontaniana. Afaka mahazo Karatra Fanomezana $100 ianao amin'ny famitana azy fotsiny! Manana 5 azo alaina isika.
Iza no afaka miditra?
Misokatra ho an'ny mponina rehetra mipetraka ao amin'ny morontsiraka afovoany NSW.
Ahoana no hiditra
Fenoy ny fanontaniana hita ao amin'ny tranokala alohan'ny 23 martsa 2022 https://www.surveymonkey.com/r/1CoastEdu
Ampidiro ny anaranao feno, mailaka, kaody paositra ary laharan-telefaona.
$100 Eftpos / Karatra fanomezana VISA
Tombany manontolo: $ 500
Avereno jerena eto ny fepetra sy fepetra feno amin'ny fifaninanana.